Kooxda Al-Shayaadiin Oo Fariin U Dirtay Dowladda Kenya, Kadib Weerarkii Shalay – Kismaayo24 News Agency
by admin 7th December 2019 0185
War-saxaafadeed kasoo baxay dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay Weerarkii shalay lagu dilay 10 ruux, kaasi oo lagu qaaday Gaari Bus oo kusii jeeday Magaalada Mandheera.
Warka kasoo baxay Al-shabaab oo ku qornaa luqada English-ka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkii oo dhaba-gal ahaa lagu beegsaday dad ay ku sheegeen inay ahaayeen gaalo Kenyaati, waxaana Warka ku saxiixnaa Afhayeenka Ciidamada Al-Shabaab ee Sheekh Cabdi Caziiz Abu Muscab.
Galabnimadii Jimcaha oo ay taariikhdu ahayd 09 Rabiicu thaani 1441 Hijri, kuna beegnayd 06/12/2019, Ciidamo ka tirsan Al-Shabaab ayaa hawlgal ka fuliyay gobolka Wajeer ee ka tirsan Kenya. Hawlgalka oo dhacay saacaddu markii ay ahayd 17:00 galabnimo, waxaa lagu dilay 10 ruux Kenyanti ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan hay’adaha sirdoonka qarsoon iyo shaqaalaha dowlada” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxay Al-shabaab.
Sidoo kale Al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkii shalay uu fariin kale u yahay dowladda Kenya iyo shacabkeeda, isla markaana weerarada ay sii wadi doonaan inta Ciidanka Kenya ay ku sugan yihiin dhulalka Soomaalida, waxaana Dowladda Kenya ay ku eedeeyeen inay boobeyso khayraadka dalka.
Dhinaca kale Taliyaha Booliska Wajeer Stephen Ng’etich ayaa xaqiijiyay in weerarka lagu qaaday Gaariga Bus, isagoona ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Dooda Xildhibaanada ee Sharciga doorashooyinka Qaran oo meel xasaasi ah gaartay.
Faah faahin laga helaayo Madaafiic ciidamada Amisom ay ku garaaceen tuullooyin hoosyimaada dagmada…..
DEG DEG:- Wasiir Gal-Mudug Katirsan oo Dil ka Bad baaday
Nabadgelyo Xumo weyn oo Soo Foodsaartey Gobolka Bari,iyadoona ay dilal kala duwan ka dhaceen Maanta.